Site na: KongoLisolona: April 18, 2020 00: 25 Enweghị asịsa
Iji mezuo nke a Abdoulaye Gueye na-akowaara anyi na ochichi ndi ochichi ahu abanyeghi uzo ato. Ọ bụ naanị obere ego n'ụlọ akwụkwọ ndị ozi ala ọzọ (n'ihi na na "mmepeanya" ozi) n'obodo ndị dị n’Africa ma mee ndokwa ka ha bụrụ nanị ụlọ akwụkwọ ndị dị n’ebe ọ bụla n’ókèala ahụ.
Mana ngwa agha kacha egbu egbu n'aka ndị gọọmentị na-achị colonial adịghị ebe ahụ.
Ma ya est ebe ozo, oburu na odighi tere aka. Ọ bụ onye na-eche echiche Senegal mgbe niile na-ekpughere anyị ya.
N’ezie, ngwa agha a bụ n’ichepụta ndị ọkà ihe ọmụma Africa n’ọdịnihu nanị site na seminarị, nke ahụ bụ ka e nwee ụlọ akwụkwọ ebe a na-azụ ndị ụkọchukwu Katọlik. Gueye hotara dị ka ihe akaebe Jean-Marc Ela et Eboussi Boulaga.
Ndị a bụ Ndị ụkọchukwu Katọlik nke Afrịka sitere na nzukọ ọmụmụ a ama ama nke usoro ahụ ga-eme ka ọkwa nke ndị na-eche echiche, nke ndị na - ekwu okwu ga - agbadata nghọta mmadụ niile na dịka ha si kee ndị okike, enweghị ihe ọ bụla dị na ha ga - anwale mgbagha ọ bụla iji wepụ agbụ nke ịgba ohu a na - adịghị ahụ anya nke a ga - ewetara ndị mmadụ mgbe onyinye nke pseudo-nnwere onwe.
Ọ na-arụkwa ọrụ. Ebe obu na ndi ozo bi n’uwa ebe o bu ndi n’enwe akwukwo ndi bu ndi kwenyere na Chineke, n’Afrika, obu ndi mmadu ndi n’enye ha otutu Chineke gha abia n’ulo ha. Bebụ onye Kraịst bụ onye nwere ntakịrị mmepe anya karịa ndị ọzọ.
Anyị ji eziokwu a gosi, ihe akpọrọ "Civilizing Mission" nke kpalitere ọchịchị na mkpochapu nke ụmụ amaala Africa na-enweghị isi, site n'aka ndị kwụrụ ọtọ "ndị isi" nke Europe. Ọ bụ n'ihi nke a ka ndị ụkọchukwu, ụmụ nwanyị Katọlik na ndị okpukpere chi niile a ga-ewepu n'Africa ga-aza aha ọjọọ: "Ndị ozi ala ọzọ", ebe ha bụ n'ezie na mmepeanya maka mmepe anya maka ndị omekome Africa. Ọ bụ ihe dị otú ahụ na ndị mmepeanya ga-aga n'ihu na ọmụmụ ha na France. (...)
Site, Jean-Paul Pougala
Ọkt31 03: 29